अदुवा - विकिपिडिया
मसला र औषधिको
अदुवा, वैज्ञानिक वर्गीकरणअनुसार जिन्जीविरेसी (Zingiberaceae) परिवारमा पर्ने प्रमखु बिरुवा हो। यसको प्रयोग साधारणत तरकारी, मसला र औषधिको रूपमा आउँछ। यसको गानो रेशादार हुन्छ। जति कम रेशा भयो अदुवा त्यति नै राम्रो मानिन्छ। नेपालमा सल्यानको अदुवा त्यस अर्थमा उत्कृष्ट मानिन्छ।
अङ्ग्रेजी नाम ginger पाली भाषाको सिन्गिभेर(siṅgivera)बाट भएको विश्वास गरिन्छ। पालीभषाको सिन्गिभेरको अपभ्रंशबाट तामिल(inji ver இஞ்சி)=> फारसी (shingavirشنگویر ))=>फ्रेन्च(gingembre)=>अङ्ग्रेजी(gingifere) हुदै अहिलेको ginger हुनपुगेको हो।
अदुवाको बोट र गानो
१ जातीय प्रयोग
३ रोप्ने तरिका
४ अदुवा खेतीको गोडमेल र सिँचाइ व्यवस्थापन
५ अदुवा खेतीमा लाग्ने रोग कीरा र तिनको व्यवस्थापन
६ मलादिको प्रयोग
७ नगद बालीको रूपमा
राई जातिमा यसको बेग्लै र विशेष जन्म, जीवन प्रक्रिया र मरनसागको सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। यो सम्बन्ध आफ्नो सृष्टिकर्ता पारुहाङ र सुम्निमाबाट सुरु भएको विश्वास गरिन्छ।
राई जातिमा अदुवाको कछुर नकाटी जातीय पूजा हुन सक्दैन। यी जाति आफ्ना हरेक देवता पुज्दा अदुवा काट्दछन् जसलाई यारी वेङमा अर्थात् नेपालीमा काट्नु भनिन्छ। यसरी यारी वेङमामार्फत हेरिने जोखानालाई यारी खाङमा भनिन्छ। यारीमार्फत नै घरको देवता पुज्दै सब्बेफाब्बे, बालीनाली सपि्रयोस, अन्नको सह होस्, वस्तुभाउ सपि्रयोस्, फैलियोस्, आम्दानी होस् र परिवारमा सुख शान्ति छाओस् भनी माङ (देवता) साग आछापिछा लिइन्छ। यसरी नै गाउ र समाजको राम्रो नराम्रो के हुने हो ? त्यो पनि केलाईन्छ। यसैको सहयोगले आफू, आफ्नो परिवार गाउ समाजको रक्षा कसरी गर्ने हो ? उपाय पनि खुट्याइन्छ। वास्तवमै यो एक अनौठो संस्कृति हो।
आफ्नो भाषामा राई जातिले अदुवालाई बेछुक भन्दछन्। राई जातिका अनुसार वेछुक दुई प्रकारको हुन्छ, सुवि र होम्लोङ बेछुक। बढी पिरो र रेसादार हुने अदुवा सुवि अदुवा हो भने अर्को कम रेसादार र केही गुलियो स्वादको होम्लोङ अदुवा हो। अझ जङ्गलमा पाइने अदुवाजस्तै हुने सालुवीलाई पनि अदुवाको जातभित्र नै मानिन्छ तर प्रयोगमा भने सालुवी आउँदैन, आए पनि माङमा (देवता)मा चलाउन मिल्दैन। चुलोमा नजाने मृतात्माहरूलाई बाटो देखाउँदा मात्र प्रयोग हुन्छ। अघिल्ला सुवि र हाम्लोङ अदुवा भने सबै पूजामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। थारु जातिमा अदुवा लाई विशेष पर्वसँग जोडेर हेरिन्छ।
चिसोको बाथ र कम्मर दुखेमा
पेट को ग्यास
खोकी र सासको रोग
भोक नलागेमा वा पेट सफा नभएमा
अदुवा खासगरी चैत्र/बैशाख महिनामा रोपिन्छ। यो खेती गर्नका लागि सामान्यतया पानी नजम्ने दुमट किसिमको माटो उपयुक्त हुन्छ। बारी जोतेर राम्रोसँग डल्ला फोरी माटोलाई बुर्बुर किसिमको बनाउनु पर्दछ। त्यसपछि ड्याङ खनेर त्यसमा कम्पोष्ट मल अथवा पचेको गोबरमल हाल्नु पर्दछ। त्यसको माथि अदुवाको पानालाई स-सानो टुक्रामा भाँचेर रोप्नु पर्दछ। यसरी टुक्रा भाँच्दा प्रत्येक टुक्रामा कम्तीमा एउटा टुसो पर्ने गरी सावधानीपूर्वक भाँच्नुपर्दछ। कम्पोष्ट मलमाथि अदुवाको बीउ राखिसकेपछि धुलो माटोले पुर्नु पर्दछ। झार आदिबाट जोगाउनका लागि सुकेको पतकर आदि ड्याङमा राख्न सकिन्छ। अदुवा रोपेको ठाउँमा उम्रेको झारलाई बराबर उखेलीरहनु पर्दछ। अदुवाको बिरूवा राम्रोसँग उम्रेपछि अघि रोपेको बीऊ झिक्नु पर्दछ। यसरी झिकिएको बीऊको टुक्रालाई माऊ र कतै बुढी पनि भन्दछन्। माऊ अदुवा सामान्य अदुवा सरह मसलाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएको हुँदा यो लोकप्रिय नगदेवाली हुन पुगेको हो। बजारमा पनि माऊ अदुवा राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्छ। माऊ झिकिसकेपछि अदुवालाई उकेरा अर्थात् माटो दिनु पर्दछ। चैत्र बैशाखमा रोपेको अदुवा कार्तिक/मंसीरमा खन्न सकिन्छ।
अदुवा खेतीको गोडमेल र सिँचाइ व्यवस्थापनसम्पादन
अदुवा बालीको उत्पादन राम्रोसँग लिन गोडमेल तथा सिँचाइको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । अदुवा कम्तीमा ३ पटक गोडाई कार्य गर्नु पर्दछ । पहिलो गोडाई कार्य रोपेको ३० देखि ३५ दिन पछि, दोस्रो गोडाई रोपेको ६० देखि ६५ दिनपछि र तेस्रो गोडाई अदुवा रोपेको ९० देखि ९५ दिन पछि गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अदुवाको गानो ठूलो भएमा श्रावणदेखि भाद्र महिनामा पुरानो गानोको एक भाग निकालिन्छ, जसलाई ब्रुनी निकाल्ने भनिन्छ । अदुवालाई सुख्खा मौसममा रोपिने भएकोले गर्मी मौसममा सिँचाइको आवश्यकता पर्दछ । माटो सुख्खा देखिएमा पानी नजम्ने गरी आवश्कतानुसार सिँचाइ गर्नु पर्दछ । यदि सिँचाइको उपलब्धता छ भने गोडमेल गरी थप मल दिइसके पछि हल्का सिँचाइ दिनु पर्दछ । यसो गर्नाले माटोमा भएको खाद्यतत्व प्राप्त गर्न योग्य अवस्थामा पुयाउन सहयोग गर्दछ ।
अदुवा खेतीमा लाग्ने रोग कीरा र तिनको व्यवस्थापनसम्पादन
अदुवालाई माटो मुनी बस्ने मुख्य गरी खुमे्र कीरा र रातो कमिला, धमिरा आदिले नोक्सान गर्दछन् । यी कीराहरु देखिनासाथ गाई,भैंसी वा अन्य जनावरहरूको पिसाब सङ्कलन गरी ७ दिनसम्म कुहाएर १ भाग मूत्रमा ३ देखि ४ भाग पानीमा मिसाएर बोटको फेद वरिपरि माटो भिज्नेगरी छर्नु पर्दछ । माटोमुनी हानिकारक कीराहरु देखिने बित्तिकै डर्सवान वा मालाथियान धुलो नामका रासायनिक विषादीको झोल २ एम.एल. प्रतिलिटर पानी वा १ के.जि. प्रतिरोपनीका दरले बिरुवाको फेद वरिपरि माटोमा छर्नु पर्दछ ।
नगद बालीको रूपमासम्पादन
अदुवा आजकल नेपालमा एउटा प्रमुख नगदे बालीको रूपमा लगाइने गरिन्छ । यो नेपालको प्राय सबै ठाँउमा उत्पादन हुने भएता पनि विशेष गरी मध्य पहाडी क्षेत्रमा बढि मात्रामा लगाउने गरिन्छ ।
विकिमिडिया कमन्समा अदुवा सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अदुवा&oldid=998041" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २ मार्च २०२१, २३:१५
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २३:१५, २ मार्च २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।